WHAT IS THE CENSUS? | be-counted-mn
LAAKKOFSI UUMMATAA MAALI?
DAYS TO COUNT!
Lakkoofsi uummataa bakka mootummaan uummata biyya isaa itti lakkaa’udha. Waliigalteen Lakkoofsa uummataa Bitootessa 01, 1790 pirezidaantii Geaorge Washingtoniin fi kan biroon mallattaa’e. Guyyaan filannoos Hagayya 2 ture. Hooggansa daayireektara mootummaa naannoo, Thomas Jefferson, jalatti lakkoofsi uummataa naannolee 13 dabalatee kutaalee akka Keentukee, Maayin, Veermoont, fi Tennessee keessatti gaggeeffama.
LAAKKOFSI UUMMATAA A
JECHUUN SIIF MAALI?
Odeeffannoon lakkoofsa uummataa irraa sassaabamu dhimmoota baay’ee murteessa.
Isaan keessaa baay’ee barbaachisoon:
Odeeffannoon lakkoofsa uummataa waggaa waggaan gara doolaara biliyoona $589 (doolaara biliyoona $15 hawaasa Mineessotaaf ramadamu dabalatee) mootummaa federaalaa irra gara uummata biyyattiitti akka ramadamuuf ajaja. Hir’inni nama tokkoo lakkoofsa uummataa irraa waggoota kurnan dhufaniif hir’ina doolara $15,000 misooma oola. , maddoota eegumsa daa’immanii, suphaa fayyadama uummataa, eegumsa fayyaa fi kanneen biro irratti fida.
Lakkoofsi uummataa hamma bakka bu’insaa naannoon tokko mana maree bakka bu’ootaa Ameerikaa keessaa ni murteessa. Akkasumas hamma filannoo aanaa fi mootummaa naannoo ni murteessa. Kuni agarsiiftuu akkaataa qabeenyi naannoleef itti raabsamuti.
Lakkoofsi uummataa warra dhimma daandii, manneen barnootaa, hospitaalota, giddugaleeyyii buleeyyii, akkasumas tajaajila balaa tasaa irratti karoora murtee kennitootaa ni gargaara.
Lakkofsi uummataa haala ramaddii warshaa fi kuusaalee, qacarrii hojjattootaa fi qorannoo gabaa irratti dhimmoota daldalaan walqabatan hojjachuuf ni gargaara.
​ODEEFFANNOOWWAN AKKAMII QABAATA?
Kaayyoon lakkoofsa uummataa tokkoon tokkoo namoota Ameerikaa keessa Eebla 01, 2020 jiraatanii lakkaa’uudha. Gucni lakkoofsa uummataas gara qe’ee jiraattotaatti iimeeliin ergama. Namoonni mana keessa jiraatan kamuu lakkaa’amuu qabu.
YOO GUCICHA GUUTTUU
BAATTAN MAALTU TA'A?
Lakkoofsi uummataa jiraachuu keenya mirkaneessa. Lakkoofsi uummataa jiraachuu keenya mirkaneessa. Yoo lakkaa’amuu baattan mul’achuu hin dandeessan. Isin hin mul’anne jechuun immoo tajaajiloota muraasatu hawaasa naannoo sanaaf ramadama. Hirmaannaan keessan lakkoofsa uummataa keessatti murteessaadha. Isin ni murteessitu.
© 2019 by The Anika Foundation. Proudly created Ndidi Marie Grafix